ဇူလိုင်လ 23, 2017
အလက်ဇန္ဒြာ Mor သည် Tagua မျိုးစေ့နှင့်သစ်သား Lotus ပန်းပွင့်ထွင်းပန်းပွင့်စိန်နားကပ်
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလူမှုရေးအရတာ ၀ န်ယူမှုမြင့်မားသည့်ရတနာဆေးတောင့်အသစ်တစ်ခုသို့ ဦး တည်သွားမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာခရီးစဉ်။ သူမ၏ ၇ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Haute Joaillerie ဒီဇိုင်နာအဖြစ်အလက်ဇန္ဒြာ Mor သည် Tagua Seeds Collection ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
Tagua မျိုးစေ့စုဆောင်းခြင်း Alexandra Mor အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ ဒါက Tagua မျိုးစပါး featuring ပထမ ဦး ဆုံးစုဆောင်းမှု, ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုကိုယ်စားပြုဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့် ဆင်ဆင်စွယ်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သော၊, ထိုနေဆဲရတနာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
Tagua Seed - Alexandra Mor အတွက် Russel Starr
တန်ဂူမျိုးစေ့စုဆောင်းခြင်းသည်ဘာလီတွင် Mor နေထိုင်စဉ်ဝိညာဉ်ရေးရာခရီးစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ နက်ရှိုင်းသောလူ့ထိတွေ့မှုနှင့်လိုချင်မှုတို့ကိုယူဆောင်ခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောရတနာများကိုသူမချဉ်းကပ်မှုအားကြွယ်ဝစေသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုအတွေ့အကြုံ လက်ဝတ်ရတနာများတွင်ဆင်စွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအစားထိုးရန်ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေခြင်း.
“ Tagua နဲ့ငါအလုပ်လုပ်ချင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဆင်ဆင်စွယ်အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်မှာဖြစ်တယ်။ ယနေ့ဆင်များ၏သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။ ဆင်စွယ်ဖြင့်သတ်ဖြတ်မှုများသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အလွန်ခံစားမိသည်။ ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဆင်မပါဘဲမမြင်နိုင်ဘူး၊ သူတို့ကမယုံနိုင်လောက်အောင်များတယ်၊ ငါတို့လူသားတွေလိုပဲ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေ၏ဒီအင်အေနှင့်ဉာဏ်ပညာများစွာကိုသယ်ဆောင်ကြသည် အဲဒါကတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဆင်စွယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသောကြောင့်ယနေ့တွင်၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်တက်ကြွစွာကူညီရမည်။ ဆင်တွေကိုကာကွယ်တာဟာ Mother Nature ကိုကာကွယ်တာနဲ့တူတယ်။ တိရိစ္ဆာန်များ၊ သစ်တောများနှင့်ထိုဒေသများတွင်နေထိုင်သောရပ်ရွာလူထုများ။ ဘယ်လိုလဲ? တက်ကြွစွာဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ရောနှောလက်လီအရောင်းဆိုင်ဒီဇိုင်နာများနှင့်စားသုံးသူအသိပေးနှင့်ပညာပေးခြင်းအားဖြင့်။ အလက်ဇန္ဒြာ Mor”
ရှိရာဤသူကားအ Tagua မျိုးစေ့များ ဤတစ်ဖြစ်ခြင်းအတွက်လာကြ ဆင်ဆင်စွယ်နီးပါးတူညီရုက္ခဗေဒအခြားရွေးချယ်စရာ တစ်နှစ်အတွင်း Tagua Palm တစ်ခုတည်းသည်ပျမ်းမျှအာဖရိကဆင်ကဲ့သို့ပျံသန်းနိုင်သမျှဆင်စွယ်များထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးစဉ်းစားရန်လုံလောက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတိရိစ္ဆာန်များကိုမျိုးသုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်ပွါးစေသောနေရာတွင်ရပ်တန့်ရန်အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
ဘာလီကျန်းစ်အတွေ့အကြုံက Mor ကိုဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သည်။ သူသည်သူမ၏စုဆောင်းမှုကိုပုံသွင်းရန်ကူညီခဲ့သည်။ Tagua မျိုးစေ့စုဆောင်းခြင်း ဘာလီ၏လေးနက်လေးစားမှုထဲကအဓိကအားထားဒီဇိုင်နာသည်လက်ရှိနေထိုင်နေသည့်နေရာ၊ ဘာလီလူမျိုးတို့၏မူရင်းနှင့်မေ့ပျောက်လုနီးပါးအမွေအနှစ်၊.
အလက်ဇန္ဒြာ Mor သည်ဘာလီရှိအကောင်းဆုံးပန်းပုများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် (ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်) ရှေးရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ၂၂ ကာရက်ရွှေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောရွှေပန်းထိမ်သမားများနှင့်အတူ။ ပေါင်းစပ်နေစဉ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို အသစ်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲပစ္စည်းများထို့ကြောင့်သူမ၏လက်မှတ်ဗေဒဒီဇိုင်းများကိုတစ်မူထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုထည့်သွင်း။
Alexandra Mor ၏ Tagua မျိုးစေ့စုဆောင်းမှုကိုပုံဖော်သည့် Savoir-faire
အလက်ဇန္ဒြာ Mor ရဲ့ဘာလီအလုပ်ရုံမှာ
အလက်ဇန္ဒြာ Mor နှင့် Tagua မျိုးစေ့စုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသောဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များနှင့်ရွှေပန်းထိမ်များ
ဆိုလိုသည်မှာ Alexandra Mor မှကျော်ကြားသောလက်မှတ်စုဆောင်းခြင်းများရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အဲဒါကိုမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ် Mor သည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျောက်မျက်ရတနာများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်သူမ၏ Tagua Seeds Capsule နှင့်အတူအလက်ဇန္ဒြာသည်သူမ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေရန်၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ၊ စားသုံးသူများနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအားအလုပ်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်လာစေရန် ဦး ဆောင်သည့်ရတနာကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သူမ၏အသံကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပိုပြီးသတိရတဲ့နည်းလမ်း -
Tagua Capsule Collection ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏ Signature Collection သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းဗေဒကိုအစားထိုးရန်မဟုတ်ဘဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစိတ်နှင့်မှတ်မိစေရန်ဇိမ်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောစကားဝိုင်းများကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စုဆောင်းသူများကြားတွင်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုအသုံးပြုပါ။ အလက်ဇန္ဒြာ Mor”
Tagua မျိုးစေ့များစုဆောင်းမှုတွင်ပါဝင်သောနားများ၊ လက်စွပ်များ၊ လည်ဆွဲများ၊ လက်ကောက်များ၊ လက်ညှပ်များနှင့်ရိုးရာဘာလီလူမျိုးတို့၏သက်ရှိသစ်ပင်၊ သို့မဟုတ်ကူနွန်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ Nias ကျွန်း၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်စွမ်းအား၊ ပါဝါနှင့်အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအလှဆင်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အလက်ဇန္ဒြာနီပါလီနီယို Bodhi ၂၂ ကာရက်ရှိရွှေပုတီး၊ ဘားရို့နှင့်ပုလဲနှင့်ထွင်းထုထားသောတက်ဂူအမွှာပုတီးရှည်လျားသောမာလာလည်ပင်း။
အလက်ဇန္ဒြာ Mor ကထွင်းထားသော Subang Tagua မျိုးစေ့နှင့်အနက်ရောင်သစ်သား Hoop နားကပ်
အလက်ဇန္ဒြာ Mor ကထွင်းထားသော Tagua အမျိုးအနွယ် cuff
အလက်ဇန္ဒြာ Mor မြမြ Smokey Topaz သည်သစ်သားနှင့် Tagua မျိုးစေ့ကွင်းပေါ်တွင်တင်ထားသည်
အလက်ဇန္ဒြာ Mor Long ကထွင်းထုထားသော Tagua မျိုးစေ့နှင့် Baroque ပုလဲနားများ
အလက်ဇန္ဒြာ Mor Pearl သည်သစ်သားနှင့် Tagua အမျိုးအနွယ်လက်စွပ်ပေါ်တွင်တန်ဆာဆင်ခဲ့သည်
Alexandra Mor Oval သည် Garnet, Tagua နှင့် Diamond Ring ကိုဖြတ်ခဲ့သည်
Alexandra Mor Tagua မျိုးစေ့ Bodhisattva ၏သနားခြင်းကရုဏာဆွဲကြိုးလည်ဆွဲ
အလက်ဇန္ဒြာ Mor Tagua မျိုးစေ့၊ Baroque peral နှင့် ၂၂ Karat Gold ပုတီးစေ့လက်ကောက်များ
အလက်ဇန္ဒြာ Mor Tagua မျိုးစေ့၊ Baroque ပုလဲနှင့်ထွင်းထားသောသစ်သား Lotus နားကပ်
လက်ဖြင့်ထွင်းထားသော Tagua မျိုးစေ့များ၊ အနက်နှင့်အနီရောင်ဘာလီယန်၊ Sumatran ပုလဲများနှင့် ၂၂ ကာရက်အဝါရောင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ရာသည် Mor ၏လူသိများသောရှားရှားပါးပါးလှပသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် Diamond melee တို့နှင့်အတူသူတို့၏ဇိမ်ခံမှုကိုဖော်ပြသည်။ အလက်ဇန္ဒြာ Mor ၏အိမ်အတွက်တစ် ဦး -of-a- ကြင်နာဖန်တီးမှု။
အလက်ဇန္ဒရ Mor ။ Ken Kochey ရဲ့ပုံတူ
ကျွန်ုပ်၏ဘာလီအတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဝိညာဏနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဇာတ်လမ်းများကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုဘာလီမှာဒေသခံအသင်းနဲ့လုံးဝပုံစံပြုပြီးဒီဇိုင်းလုပ်တာကသဘာဝပဲ။ ကျွန်ုပ်၏စုဆောင်းသူများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထူးကဲစွာအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းအားဖြင့်ဤဖန်တီးမှုခရီးကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ဘာလီရှိဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များနှင့်အတူနှစ်စဉ် Vogue US Protagonist အဖြစ်အပျက်မှအခြားရတနာရတနာဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူပါသည်။ နှင့်ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောရတနာ။ အလက်ဇန္ဒြာ Mor”
အလက်ဇန္ဒြာ Mor သည်နာမည်ကြီး Photographer Ken Kochey နှင့်ပူးပေါင်းပြီးသူမ၏ဘာလီခရီးနှင့် Tagua Seeds Collection အားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Alexandra Mor အတွက် Sara Laird & Good Company မှ Ken Kochey မှ Bali // Tagua Story Photography
ဆုရဓာတ်ပုံဆရာ Ken Kochey သည်ကမ္ဘာကိုအမြဲတမ်းခရီးထွက်ခဲ့ပြီး၊ Conde 'Nast Traveller၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်း၊ Aston Martin နှင့် Coca Cola စသည့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်ကြော်ငြာဖောက်သည်များအတွက်အတွေ့အကြုံများကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။ ယနေ့သူသည်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူဘာလီတွင်နေထိုင်ပြီးခရီးသွားခြင်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်ဓာတ်ပုံပညာကိုဆက်လက်လေ့လာနေသည်။
အလက်ဇန္ဒြာ Mor ကသူမရဲ့စုဆောင်းမှုအသစ်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် နယူးယောက်ဖက်ရှင်အပတ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့ Tribeca ရှိ Spring Studios တွင် Vogue Italia ၏နှစ်စဉ်ကျင်းပသော US Protagonist event တွင်, အခြား 11 ရွေးချယ်ထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒဏ်ငွေရတနာဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူ။ Tagua မျိုးစေ့စုဆောင်းမှုမှရရှိသောငွေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ CC
Tags:အလက်ဇန်းဒါး mor • အသစ် • ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်
“ မှတ်ချက် ၁ ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိသောလက်ဝတ်ရတနာ - Alexandra Mor သည် Haute Couture Tagua Seeds Capsule Collection ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်"
Pingback: အလက်ဇန္ဒြာ Mor သည် Positive Luxury's Butterfly Mark ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည် HIGH ရတနာအိပ်မက်